Seluze lwafika olungaliwa ngempelasonto kosomankomane - Bayede News
Ibuye yahlabana iKingsmead ngokusingatha enohlonze yekhilikithi
Asebala izinsuku abuyele emakhaya amabhokisa ayingxenye yomqhudelwano ohlelwe nguphromotha uMnu uThulani “Sir” Magudulela.
Laba somankomane u-Ayanda Mthembu waseMandeni, u-Ibrahim Tamba waseTanzania, uKhumbulani Mdletshe wakwaNongoma noHabibu Pengo waseTanzania selokhu bavaleleka kusukela ngoLwezi nyakenye ngesikhathi okwakuthiwa uzoba ngaso lo mqhudelwano.
Namaholidi kaZibandlela bawachithe besejimini kwazise bebengazi ukuthi lo mqhudelwano uzogcina ube nini kwazise usuhlehle kahlanu ngenxa yokhuvethe.
Lezi zimpi kwakuhlelwe ukuthi zibe ngoLwezi zahlehlela umhla zili-19 kuZibandlela zaphinde futhi zahlehliswa ukuba zibe mhla zili-10 kuMasingana nonyaka.
Ziphinde zahlehlela umhla zingama-24 kuMasingana abezamankomane benethemba lokuthi ngeke zisahlehla njengoba ngisho iMeneja Jikelele yezamankomane esifundazweni iKwaZulu-Natal, uMnuz uMike Dube, yakuqinisekisa ukuba khona kwazo kodwa zaphinde zahlehla.
Lo mqhudelwano ozokuba ngeSonto kubukeka kungekho osekungawuvimba ukuba uqhubeke. Uzobanjelwa ehholo lakwaNongoma kanti izimpi zizoqala ngehora le-12 emini.
ElaboHlanga likhuluma noMagudulela uthe: “Ngijabule khona ukuthi kule mpelasonto nakanjani ngeke siphazamiseke. Umoya wami ubuhlungu kakhulu ukuthi lo mqhudelwano ubusuhlehle amahlandla amaningi, ngijabule khona kodwa angijabule kakhulu. Okwenza lokho ukuthi ngokuhlehla komqhudelwano imali iphume kakhulu ukubhekelela osomankomane laba abazolwa kulo mqhudelwano.”
Ezimpini ezizokuba khona uMthembu oteketiswa ngokuthi uNyamazane uzovovana inkani noTamba bebanga ibhande leWorld Boxing Federation (WBA) Middleweight. UMthembu uyena ozobe evikela leli bhande.
Enye impi enkulu ebhekiwe kulo mqhudelwano ekaMdletshe noPengo abazobe bebanga ibhande leWBF International Welterweight elingaphethwe umuntu.
“Yize lezi zimpi zingeke zibe nazo izibukeli kodwa engingakusho ukuthi zizoba sezingeni eliphezulu. Ngibuhlungu ukuthi abathandi balo mdlalo bazophuthelwa ingcwenga yesibhakela. Okujabulisayo ukuthi uzobanjelwa endaweni yasemakhaya. Inhloso yeLudonga Boxing Promotions ukufaka lo mdlalo ezindaweni eziningi, kakhulukazi ezasemakhaya. Ngikholelwa ukuthi emakhaya ilapho ikhono licashe khona kakhulu, inkinga nje aliveli,” kusho uMagudulela obonge uMnyango Wezemidlalo ngokweseka lo mqhudelwano.
Ezinye izimpi ezizoba khona ekaSiyabonga Mpangela no-Anerl Lubisi, ekaLungisani Mkhize noLoyiso Basayi, eka-Innocent Mwelase noSandile Dumisa kube ekaSabelo Cebekhulu noManelisi Ndlovu.
ElaboHlanga likhulume noZwelinkosi Magudulela ongumqeqeshi kaMthembu ukuzwa amalungiselelo ukuthi ahambe kanjani. “Konke kuhambe kahle kakhulu uMthembu ukulungele ukubuyela eringini. Iqiniso ukuthi ubengekho muhle emoyeni njengoba bekulokhu kuhlehliswa izimpi, simkhuthazile ukuthi izinto ezinje ziyenzeka kulo mdlalo, kumele aqine adlulise okudala. Ngokomqondo ukulungele ukubuyela eringini. Angingabazi ukuthi uzolivikela ngempumelelo ibhande lakhe,” kusho uZwelinkosi.